"Izao no mampionona ahy amin’ny fahoriako; ny teninao no mamelona ahy."Salamo 119:50
"Ny teninao no fifaliako sy firavoravoan’ny foko."Jeremia 15:16
«Tanora aho tamin’izany fotoana izany, ary mbola tsy niorina tsara tamin’ny finoana. Indray andro, nanatrika fivoriana kristiana aho, ary nahare izao teny izao: «Inona no hanatanjaka ny finoanao? Ireo fisaintsainanao ve? Ny vaovao androany ve? Izay heverin’ny hafa ve? Tsia, fa ny Baiboly! Rehefa mamaky azy ianao, dia hahazo sakafo sy hihamatanjaka ny fanahinao». Dia takatro fa ny Tenin’Andriamanitra ihany no mahafaka ahy amin’ireo fisalasalako.»
Ny Tenin’Andriamanitra no fitaovana voalohany ampiasain’ny Fanahy Masina, mba hanatanjahana ny finoantsika. Rehefa mikorontan-tsaina isika, dia misy miteny hoe: «Aza be eritreritra eo, fa mifikira!». Saingy tsy mitondra mankaiza ny torohevitra toy izany. Ny Tenin’Andriamanitra no afaka mampahery sy mampianatra antsika, mba hahazoantsika mandroso hatrany. Rehefa mamaky sy misaintsaina azy isika, dia mifikitra amin’ny Tompo ny fontsika, ka mandray hery sy fahazavana avy amin’izany Teny izany isika.
Rehefa mampahery namana mpino, dia mety hahasoa ny miresaka zavatra niainan’ny tena manokana, mba hampisehoana fa afaka miara-mizaka aminy izay manahirana azy isika. Nefa ny Tenin’Andriamanitra ihany no “velona sy mahery” (Hebreo 4:12) ary mahay manova fiainana.
Raha tsy feno ny fitiavan’Andriamanitra aho, dia tsy hisy akony tsara ao am-pon’izay olona tiako hampaherezina ny hafatra entiko. Ary isika tsy mahay miditra any am-pon’ny olona, tahaka ny ataon’ny teny ao amin’ny Soratra Masina, izay “nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra” (2 Timoty 3:16). Aoka hanaiky ho vonton’ny Tenin’Andriamanitra sy hotarihin’ny Fanahiny, mba hiaina sy hampita izay ho fanampiana ny hafa amin’ny fotoan-tsarotra.